पुरुष र महिलामा को उत्कृष्ट ? – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ समाज ∕ पुरुष र महिलामा को उत्कृष्ट ?
पुरुष र महिलामा को उत्कृष्ट ?
दीप संञ्चार असोज ३, २०७८ गते १९:४६ मा प्रकाशित
पुरुष र महिला दुवैको जीवन जिउँदाको अनुभव
पुरुष भएको कारण समाजले मलाई जबर्जस्ती पुरुषका रुपमा ढाल्न खोज्थे । म पुरुष भए पनि मलाई महिलाको अनुभूति हुन्छ म भित्रै देखि महिला हुँ भन्ने हुन्थ्यो। जे होस् दुवै जीवन जिउँदा अहिले मलाई महिला भएकोमा गर्व लाग्छ । पुरुष भएर अरूलाई दबाएर बाँच्न पाउने च्वाइस पनि ममा थियो तर मैले नारी जीवन रोजेँ । अरूमाथि हिं सा एवं वि भेद गर्नु नपरोस् भनेर मैले महिला नै हुन चाहेँ । पुरुष सदैव पुरुषत्वको धाकमा महिलामाथि अधिकार जमाउन खोज्छ भने महिलाहरू त्यस्ता चुनौतीलाई चिरेर पनि अघि बढ्न अग्रसर हुन्छन् ।
तपाईं महिला नै हुनुपर्ने कारण के हो ?
म महिला नै हुनुपर्ने एउटै मात्र कारण छैन । शारीरिक रूपमा पुरुष भएर जन्मिए पनि भावनात्मक रूपमा म महिला हुँ । मभित्रको विचार, व्यवहार, धैर्य, सहनशीलता अनि ममता नै म महिला बन्नुपर्ने कारण हुन् । घरपरिवार, बालबच्चा, कार्यालय मात्र होइन देश हाँक्ने र सम्हाल्ने हरेक महिलाले पुरुष भएको अनुभूति गर्न सक्छन् तर हरेक पुरुषले आफूलाई महिला अनुभूति गर्न गार्‍हो छ ।
समान भनिन्छ तर मेरो विचारमा महिला नै उत्कृष्ट छन् किनभने महिला सहनशील, सुन्दर र गर्भ धारण गरेर सन्तान जन्माउने प्राणी हुन् ।
पुरुषप्रधान समाजमा विभिन्न बोझ र जिम्मेवारीले थिचिनुका बाबजुद सारा चुनौती चिरेर पनि नेपाली महिला उच्च पदमा पुग्न सफल छन् । महिलामा भएका यस्ता गुण, क्षमता एवं विशेषताले उनीहरूलाई उत्कृष्ट बनाएको छ । नारी म्यागजिनबाट